Ye-Mon's Personal Pages: 2010
ပြည်သူ့ကျန်းမာ ကြယ်တစ်ပွင့် ကြွေလေပြီ။
လူထုအခြေပြု ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (Primary Health Care) သဘောတရားကို အစဉ်တစိုက် ပြုစုပျိုးထောင်လာခဲ့သူ ပါမောက္ခ ကားလ်တေလာ တစ်ယောက် ၂၀၁၀ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားလေပြီ။ ပါမောက္ခတေလာရဲ့ ဘ၀တစ်သက်တာ စွမ်းဆောင်ချက်များကို ဂျွန်စ်ဟော့ပ်ကင်းစ် တက္ကသိုလ် ၀က်ဆိုဒ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားထားသည်ကို ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
2 comments Labels: international health, news, primary health care, public health
Click "Read More" for Lyrics
From "16 Super oldies", EMI records (Authorized-Gramophone Records Ltd)
(Song and Lyrics sent by Anurag Kothari)
Listen well while I tell youastory,
Ofaboy andagirl in the spring,
As the first flower burst into glory,
And I heard, every bird start to sing.
Papa, He loves Mama,
Mama, she loves Papa, (My poppet..)
Mama, she loves Papa.
Inachurch, far away from the city,
Onamorning in May, they were wed
And the bride's starry eyes looked so pretty,
That the world looking on smiled and said
Mama, she loves Papa,
Justayear from the day they were married,
Cameagift from girl to the boy,
Looking proud asaqueen as she carried,
(giggles n laughs while singing this verse)
4 comments Labels: music, video
The world is flat for LEAD
၂၁၊ ၁၊ ၂၀၁၀
LEAD အတွက်တော့ ကမ္ဘာကြီး ပြားလေပြီ
ရန်ကုန်က LEAD အဖွဲ့တွေက ရုံးချိန်မှာ လုပ်စရာရှိတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ပြင်ဆင်ပြီး ရုံးဆင်းခါနီး ဒါမှမဟုတ် ရုံးဆင်းအပြီး ရန်ကုန် ညနေပိုင်းလောက်မှာ လန်ဒန်က လူတွေဆီကို အီးမေးလ်နဲ့ ပို့ထားတယ်။ အချိန်က လန်ဒန်မှာ နေ့လယ်လောက် ဖြစ်နေပြီး အမေရိကား အရှေ့ဖက်ကမ်းမှာတော့ မနက် မိုးမလင်းသေးဘူး။
လန်ဒန်က လူတွေက သူတို့ ရုံးချိန်အတွင်းမှာ LEAD အီးမေးလ်ကို ကမန်းကတန်းဖတ်၊ ချက်ချင်း အကြောင်းပြန်စရာရှိ ပြန်ပြီး သူတို့ ရုံးဆင်းချိန် (လန်ဒန်ရဲ့ ညနေခင်း) ရောက်တာနဲ့ LEAD အဖွဲ့ရဲ့ အလုပ်ကို စကိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အမေရိကား အရှေ့ဖက်ကမ်း (ဘော်လ်တီးမိုး၊ နယူးယောက်) မှာတော့ နေ့လယ် ဖြစ်နေပြီး ရန်ကုန်မှာတော့ သန်းခေါင်ကျော် တစ်ချက်တီး ရှိရောပေါ့။ အရှေ့ဖက်ကမ်းက လူတွေက ရန်ကုန်က ပို့ထားတဲ့ အီးမေးလ်နဲ့ လန်ဒန်က အကြောင်းပြန်ထားတာတွေကို ဖတ်ပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ကြိုသိနေပါတယ်။
အရှေ့ဖက်ကမ်း (ဘော်လ်တီးမိုး၊ နယူးယောက်)
အဲ အမေရိကား အရှေ့ဖက်ကမ်းက လူတွေ ရုံးဆင်းချိန်လောက်ကျတော့ လန်ဒန်မှာလည်း ညဉ့်နက်နေပြီ။ လန်ဒန်က အဖွဲ့က လုပ်စရာရှိတဲ့ အပိုင်းလဲ ပြီးသလောက် ရှိနေပြီ။ အဆင်ပြေတဲ့အခါ လန်ဒန်နဲ့ အမေရိကား အရှေ့ဖက်ကမ်း အင်တာနက်ချက် ဖြစ်ဖြစ် ဖုံးဖြစ်ဖြစ်ပြော ဒါမှမဟုတ်လဲ အီးမေးလ်နဲ့ပဲ လန်ဒန်က လူတွေက အရှေ့ဖက်ကမ်းက လူတွေဆီ အလုပ်ကို ဆက်လွှဲပါတယ်။ အရှေ့ဖက်ကမ်းက လူတွေက ရုံးဆင်းချိန် ညနေပိုင်းလောက်မှာ သူတို့ဆက်လုပ်ရမယ့် အပိုင်းကိုလုပ် လက်စသတ်စရာရှိတာ လက်စသတ်ပြီး ည ၁၀ နာရီလောက်ကျတော့ ရန်ကုန်ကို အီးမေးလ်နဲ့ ပြန်ပို့ပါတယ်။ ဒီအချိန်ဆိုရင် ရန်ကုန်မှာ မနက် ၉ နာရီ ရုံးတက်ချိန် ရောက်ပြီပေါ့။ မနေ့က ရန်ကုန်က LEAD အဖွဲ့တွေ ရုံးဆင်းချိန်မှာ လန်ဒန်ကို ပို့ထားတဲ့ ကိစ္စက ဒီကနေ့ ရုံးတက်တော့ အီးမေး အင်ဘောက်စ်ထဲမှာ အဆင်သင့် ရောက်နေပါပြီ။
ကမ္ဘာကြီးကသာ တစ်ခြမ်းမှောင် တစ်ခြမ်းလင်း ဖြစ်နေတာ LEAD ကတော့ ၂၄ နာရီ လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ ပြောရင် မမှားပါဘူး။ The world is flat for LEAD လို့လဲ ပြောလို့ ရနေပါပြီ။
(စကားချပ်။ ။ LEAD ဆိုတာက Link Emergency Aid & Development လို့ ခေါ်တဲ့ နာဂစ်အပြီးမှာ ဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်က လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့တစ်ခုပါ။ စာရင်းစစ်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ စာရင်းတစ်ခု လုပ်နေရင်း Thomas Friedman ရဲ့ The world is flat စာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလို့ စာစီထားလိုက်ပါတယ်။)
ဒီဖြစ်စဉ် တစ်ခုလုံးမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဆက်သွယ်ရေး နည်းတွေကတော့ …
Google voice, chat, talk, document
ဒါတွေကို ဘယ်လို သုံးရမယ် သိတဲ့ လူတွေ
1 comments Labels: nargis, ngo, perspective
Good job picasa
၂၀၊ ၁၊ ၂၀၁၀
ကွန်ပျူတာ အသစ်မှာ ပီကာဆာ မတင်ရသေးလို့ ဒီနေ့ ၃.၆ ကို ဒေါင်းပြီး တင်လိုက်တယ်။ အသစ်အဆန်းလေးတွေ ပါတယ် ဆိုလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ဓါတ်ပုံတွေမှာပါတဲ့ မျက်နှာတွေကိုချည်းပဲ ရွေးထုတ်ပေးပြီး ကိုယ်ရဲ့ လိပ်စာ စာအုပ်ထဲက လူအမည်တွေနဲ့ တွဲပေးလို့ရတဲ့ အချက်ပါ။
ဒါနဲ့ ကိုယ့်နာမည်ကို ကိုယ့်မျက်နှာ တွဲပေးလိုက်တယ် .. ကိုင်း .. လာလေရော့ .. အပ်ချလောင်း။
ကိုယ့်မျက်နှာပုံတွေ အများကြီး ရှိနေတဲ့ အထဲက တစ်ပုံပဲ အမည်ပေးရသေးတယ် ကျန်တာတွေကိုပါ ပီကာဆာက အော်တို နာမည်တပ်ပေးပါရောလား။ အလာကြီးပဲ။
ဒါတင် မကသေးဘူး ကိုယ့်မျက်နှာလို့ ထင်တဲ့ အခြားမျက်နှာတွေကိုလည်း ရွေးထုတ်ပြပြီး မှန်မမှန် စစ်ခိုင်းသေးသဗျ။
ဗုဒ်ဓေါ ... ဖခမည်းတော် ပုံတွေပါလား။ ကြက်သီးတောင် ထသွားတယ်။
စာရှုသူတွေ ကြည့်လို့ ရအောင် ပီကာဆာ ရွေးပေးထားတဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ဖခမည်းတော်ပုံတွေ အောက်မှာ စုစည်းပြလိုက်ပါရဲ့ တူမတူကြည့်ပေးကြပါဦး။
4 comments Labels: family, picasa